Inona no atao hoe Linux?
Avy amin'ny Linux (aka <° Linux) dia tranonkala natokana ho an'ny lohahevitra mifandraika amin'izany ny rindrambaiko y teknolojia maimaim-poana. Ny tanjonay dia tsy iza fa ny manome ireo mpampiasa rehetra izay vao manomboka amin'ny tontolon'ny GNU / Linux, toerana ahafahanao mahazo fahalalana vaovao amin'ny fomba mora indrindra sy azo atao indrindra.
Anisan'ny fanolorantenanay ny tontolon'ny Linux sy ny lozisialy maimaim-poana, ao amin'ny DesdeLinux izahay dia mpiara-miasa amin'ny Freewith 2018 iray amin'ireo hetsika manandanja indrindra amin'ny sehatra any Espana.
Ny ekipa fanontana avy amin'ny Linux dia misy vondrona iray manam-pahaizana amin'ny GNU / Linux, fitaovana, fiarovana ny solosaina ary fitantanana tambajotra. Raha te ho anisan'ny ekipa koa ianao dia afaka andefaso aminay ity takelaka ity mba ho tonga mpanonta.
Mpampiasa Linux antonony miaraka am-pitiavana ireo haitao vaovao, gamer ary Linux ao am-pony. Nianarako, nampiasaiko, nizara, nankafiziko ary nijaly hatramin'ny taona 2009 niaraka tamin'ny Linux, avy amin'ireo olana amin'ny fiankinan-doha, ny tahotra kernel, ny efijery mainty ary ny ranomaso ao anatin'ny fanangonana kernel, miaraka amin'ny tanjon'ny fianarana daholo izany? Nanomboka tamin'izay aho dia niasa, nanandrana ary nanolotra fizarana be dia be izay ny tiako indrindra dia ny Arch Linux arahin'i Fedora sy openSUSE. Tsy isalasalana fa ny Linux dia nisy fiantraikany lehibe tamin'ny fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny fiainako akademika sy ny fiainako satria noho ny Linux no nahaliana ahy ary amin'izao fotoana izao dia mankany amin'ny tontolon'ny fandaharana aho.
Hatramin'ny fahazazako dia tiako ny teknolojia, indrindra ny mifandray amin'ny solosaina sy ny Operating Systems. Ary nandritra ny 15 taona mahery aho dia raiki-pitia tamin'ny GNU / Linux, ary izay rehetra misy ifandraisany amin'ny lozisialy malalaka sy loharano misokatra. Nandritra izany rehetra izany sy ny maro hafa, androany, amin'ny maha injenieran'ny solosaina ahy sy manana matihanina manana mari-pankasitrahana iraisam-pirenena ao amin'ny Linux Operating Systems, dia nanoratra tamim-pitiavana aho nandritra ny taona maro, ato amin'ity tranonkala DesdeLinux mahafinaritra sy malaza ity. Amin'izay aho dia mizara aminao isan'andro, ny ankamaroan'ny zavatra ianarako amin'ny alàlan'ny lahatsoratra azo ampiharina sy mahasoa.
Ny fitiavako ny rafitry ny solosaina no nahatonga ahy hanadihady ny sosona ambony sy tsy azo sarahina avy hatrany: ny rafitra miasa. Miaraka amin'ny filana manokana amin'ny karazana Unix sy Linux. Izany no antony nandaniako taona maro hahafantarana GNU / Linux, nahazo traikefa niasa ho toy ny helpdesk ary nanome torohevitra momba ny teknolojia maimaimpoana ho an'ireo orinasa, niara-niasa tamina tetikasa rindrambaiko maimaimpoana isan-karazany teo amin'ny fiarahamonina, ary koa nanoratra lahatsoratra an'arivony ho an'ny nomerika isan-karazany haino aman-jery miavaka amin'ny Open Source. Mikasa tanjona iray foana ao an-tsaina: tsy mitsahatra mianatra.
Fitiavana rindrambaiko maimaimpoana sy tontolon'ny fandaharana. Nanomboka teo amin'ny tontolon'ny Linux aho noho ny fizarana Mandrake 7 ary efa ho 20 taona aty aoriana dia mbola eto amin'ity tontolo ity aho dia manandrana manao ny bitako foana. Hatramin'izay dia tsy nahazo diplaoma maimaimpoana fotsiny aho tamin'ny fampiasana rindrambaiko Maimaim-poana fa nanao lahatsoratra sy fampianarana maro momba izany aho.
Nanomboka ny diako tany Linux aho tamin'ny 2007, nandritra ny taona maro nitetezako fizarana tsy misy farany, hitako am-polony maro izy ireo teraka ary maro ny maty, raha ny safidiko manokana no safidiko ArchLinux sy Debian mihoatra ny hafa. Niasa tamina matihanina nandritra ny taona maro aho ho mpitantana ny tambajotra sy ny rafitra UNIX, ary koa mpamorona tranonkala vahaolana natokana ho an'ny mpanjifa.
Tiako ny milentika ao amin'ny tontolon'ny Linux, manokana amin'ny fampiasana ireo disro, indrindra ireo natao ho an'ny orinasa. Ny Freedom of the Code dia mifanitsy mivantana amin'ny fitomboan'ny fikambanana iray. Izany no antony Linux dia rafitra iray izay tsy misy eo amin'ny androko isan'andro.
Programmer izay mankafy ny Linux sy ny fizarana azy, ka nanjary zava-dehibe amin'ny andavan'andro. Isaky ny mivoaka distro vaovao miorina amin'ny Linux aho dia tsy afaka miandry ela vao manandrana, ary hahafantatra azy tsara.